China Polymer Polyol LPOP-2015 ndị ​​na-emepụta ihe na ndị na-ebubata ya Longhua
Kewara na ebumnuche
Akwụkwọ ntuziaka ngwaahịa
LPOP-2015 bụ polyether polyol na-adịghị arụ ọrụ gbanwere ya na polymer styrene-acrylonitrile (SAN) nwere ọdịnaya siri ike nke ihe dịka 15% site na ibu. Enwere ike iji ya maka imepụta ụfụfụ ngwaahịa slab.
Viscosity (mPa • s ， 25 ℃) ： 800-1500
Mmiri ： .00.05
Ọdịnaya siri ike: 14.0-16.0
LPOP-2015 bụ polymeric polyol, nke nwere ọdịnaya siri ike 15%, enwere ike iji ya na polyether polyol mepụta ụfụfụ ngwaahịa slab, ụfụfụ matarasị, na ụfụfụ polyurethane ndị ọzọ. Polyol polymer a nwere ike ịgbakwunye ike na nkwụsi ike ebumpụta ụwa, ihe na -ebu ibu. Ọ nwekwara ike ịnye ngwaahịa nwere njiri mara iku ume nke ọma, yana oke ike, ogologo ndụ.
Flexibags; 1000kgs IBC drum; Mgbachi nchara 210kgs; Ndị tankị ISO.
Nke gara aga: Polymer Polyol LPOP-2013
Osote: Polymer Polyol LPOP-2018
1.Olee otu m ga -esi họrọ polyol ziri ezi maka ngwaahịa m?
A: Ị nwere ike ịtụle TDS, ntinye ngwa ngwa nke polyols anyị. Ị nwekwara ike ịkpọtụrụ anyị maka nkwado teknụzụ, anyị ga -enyere gị aka ka ọ dabara na polyol nke ga -egbo mkpa gị nke ọma.
2. Enwere m ike nweta nlele maka ule ahụ?
A: Anyị nwere obi ụtọ ịnye nlele maka ule ndị ahịa. Biko kpọtụrụ anyị maka nlele polyols nke ị nwere mmasị.
3.Olee otú ogologo bụ ụzọ oge?
A: Ikike nrụpụta anyị na -eduga maka ngwaahịa polyol na China na -enyere anyị aka ịnyefe ngwaahịa ahụ n'ụzọ kachasị ọsọ ma kwụsie ike.
4.Can anyị họrọ mbukota?
A: Anyị na -enye ụzọ mbukota na -agbanwe agbanwe na ụzọ dị iche iche iji gboo mkpa ndị ahịa dị iche iche.